Munaasabadda xiritaanka sanad dugsiyeedka Dugsiga agoonta Rajo oo lagu qabtay Muqdisho “SAWIRRO+VIDEO” – Radio Muqdisho
Munaasabadda xiritaanka sanad dugsiyeedka Dugsiga agoonta Rajo oo lagu qabtay Muqdisho “SAWIRRO+VIDEO”
Munaasabad lagu maamuusayay xiritaanka dugsiga agoonta Rajo ee sanad dugsiyeedka 2013/2014 ayaa maanta lagu qabtay xarunta dugsigaasi oo ku yaala degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir.
Xafladda xiritaanka dugsiga agoonta Rajo ayaa waxaa ka qeyb galay Guddoomiyaha degmada Yaaqshiid Cismaan Caddaawe, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab, taliyaha ciidanka ilaalinta deegaanka ee degmada Yaaqshiid, culumaa’udiin, waalidiin iyo marti sharaf kale.
Maamulka Iskuulka agoonta Rajo Marwo Xaawo Maxamuud oo ugu horeyn xafladda ka hadashay ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee iskuulka, iyadoo intaa ku dartay in dugsiga ay wax ka bartaan in ka badan 200 arday agoon ah, kuwaasoo isugu jira gabdho iyo wiilal.
Guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Marwo Jawaahir Baarqab oo halkaasi ka hadashay ayaa ammaan iyo bogaadin usoo jeedisay ururka Rajo oo fadhigiisu yahay magaalada Oslo ee dalka Norwey, kaasoo aas aasay iskuulkan, waxeyna ku boorrisay jaaliyadaha Soomaaliyeed iney caawiyaan dugsiga agoonta Rajo.
Marwo Jawaahir Baarqab ayaa ku cel celisay ahmiyadda ay leedahay waxbaridda iyo daryeelka caruurta agoonta ah, waxeyna intaa ku dartay iney mas’uuliyiinta gobolka iyo kuwa dowladda ay gaarsiin doonto xaaladda dugsiga Rajo si loo caawiyo.
Guddoomiyha degmada Yaaqshiid Cismaan Caddaawe oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ku amaanay muwaadiniinta ururka Rajo garashadooda wanaagsan oo ay ku daryeelayaan agoonta ku tabaaleeysan degmada Yaaqshiid, wuxuuna ugu baaqay ganacsatada, jaaliyadaha iyo dadka wax heysta ineey gacan ka geystaan horumarinta dugsiga agoonta Rajo.
Ururka Rajo oo fadhigiisu yahay magaalada Oslo ee dalka Norwey ayna ku mideysanyihiin muwadiniin Soomaaliyeed oo muxsiniin ah, ayaa Laba sano ka hor degmada Yaaqshiid dugsiga agoonta, waxaana iminka wax ka barta in ka badan 200 oo arday agoon ah.
Safiirka Soomaaliya ee Talyaaniga oo Hambalyo u diray ciidanka Booliska